China Isinxibelelanisi esiPhathekayo esiSisigxina seMagnetic Hand for Transshipping Metal Plates abavelisi kunye nabathengisi | Meiko Magnetics
Inkqubo ye- Isiphatho esiphathwayo esisisigxina seMagneticichaphazele kuphela ukusetyenziswa kwamacwecwe esinyithi kwimveliso yeeworkshop, ngakumbi amashiti amancinci kunye neenxalenye ezibukhali okanye ezinamafutha. Inkqubo ehlanganisiweyo yamagnetic inokubonelela nge-50KG yokulinganisa amandla okuphakamisa kunye ne-300KG Max yokukhupha amandla. Kulula ukulawula nokufumana umazibuthe kwizinto eziyintsimbi ngesiphatho se-ON / OFF. Akukho mbane wongezelelweyo okanye amanye amandla afunekayo ukuqhuba esi sixhobo semagnethi.
1. Amaxesha ama-6 okhuseleko kuzinzo. Inqanaba eliphezulu lenkxaso yemagnethi ye-ferrite esisigxina i-50KG ilinganise ukuphakamisa amandla.
2. Ukusebenza okulula kwenza ukuba ukusebenza kusebenze. Sebenza ngesandla esinye, kulula ukubeka kwaye ukhulule.
3. Ukuphakamisa okuninzi kunokusebenza kunye ukuhambisa iinxalenye ezinkulu zesinyithi.
L (mm) W (mm) H (mm) h (mm) Ukusebenza Temp. (℃) Ikaliwe ukuXhobisa amandla (KG) UMax Pull Off Force (KG) I-NW (KG / PC)
Egqithileyo I-Neodymium Ring Magnet kunye ne-Zn Plating yezicelo zesandisi-lizwi, Izithethi zoomazibuthe
Okulandelayo: Ukusingathwa ngokuPhathekayo kweMagnetic Lifter yeePhepha zeSinyithi
Ukuphatha uMagnet ophakamisa izixhobo
IiMagnethi eziPhakamileyo zoMatshini wokuPhakamisa
Isigxina seMagnetic Hand Lifter